संवाद – Page2– SamajKhabar.com
पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा राष्ट्रियसभा गठन नभई प्रतिनिधिसभा पूर्ण नहुने भन्ने दुईथरी तर्क अगाडि आएका छन् खास के हो ? संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले फटाफट काम ग¥यो । त्यही निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले दुई महिनाअघि राष्ट्रपतिसमक्ष....पुरा पढ्नुहोस
देशको प्रधानमन्त्री बन्ने बिनोद चौधरीको चाहना
साभार सामाग्री : उद्योगपति विनोद चौधरी पूर्णकालीन राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन् । हालै कांग्रेसमा प्रवेश गरी समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा परेका उनी पार्टीको आर्थिक समृद्धि र विकास समन्वय उपसमिति संयोजकमा मनोनीत भए । यसअघि पनि एमालेका तर्फबाट सांसद बनिसकेका उनका लागि नौलो क्षेत्र होइन । तर, अहिले....पुरा पढ्नुहोस
पहिलो चरणमा निर्वाचन हुनेमध्ये सबैभन्दा चर्चामा रहेको जिल्ला हो गोरखा । वाम गठबन्धनका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नयाँ शक्ति पार्टीले तालमेल गरेपनि गोरखामा वामगठबन्धन समस्यामा परेको छ । नयाँ शक्तिका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराई र कांग्रेसका पूर्व प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभामा....पुरा पढ्नुहोस
नेपालभित्र मनपर्ने सहर ? -मेरो सबैभनदा प्यारो सहर पोखरा हो । नेपाल बाहिर कुन-कुन देशका सहर घुम्नुभएको छ ? -मैले झण्डै ३० देशको सह घुमेको छु । अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मन, सिंगापुर, बेलायत, चीन, कोरिया, दुबई, कतार, इटली, क्यानडा, स्विट्जरल्यान्ड, फ्रान्सलगायत देश पुगेकी छु । ती देशमा मननपर्ने सहर ? -इटलीको....पुरा पढ्नुहोस
० स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनावको परिणामलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? – केही ठाउँमा परिणाम अपेक्षा गरेभन्दा फरक आएको छ । हामीले जित्ने सुनिश्चित भएको भनिएका केही ठाउँमा परिणाम त्यसअनुसार आएको छैन । जनताले दिएको म्याण्डेटलाई स्वीकार गर्नु त छँदै छ । तर हाम्रोतर्फबाट सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था छैन । चुनावी....पुरा पढ्नुहोस
के–के गर्दै छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ? पहिले यहाँ २ साता काम गरें । अहिले कार्यकारी अधिकृत भएको पनि धेरै भएको छैन । यसमा जनताको बुझाइ पनि कम भएको छ । घर सरकारले होइन, जनता आफैंले बनाउने हो । सरकारले दिने भनेको पैसा पो हो । प्राधिकरणको काम भनेको सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रम, अनुदान,....पुरा पढ्नुहोस
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बिना संशोधन पारित भयो । यसमा कांग्रेसको भूमिका गौण भएको हो ? सरकार बहुमतमा हुन्छ । त्यहाँ संलग्न दलहरूको बीचमा विवाद हुन्छन् तर पनि उनीहरू बहुमतमा हुन्छन् । बहुमतबाट पारित गर्ने हो भने पारित हुन्छ । तर यो नीति तथा कार्यक्रममा वास्तविक धरातलीय यथार्थभन्दा लोकप्रियताको....पुरा पढ्नुहोस
पार्टी एक बनाउने पहिलो दायित्व सभापतिको हो
सर्वप्रथम त नेपाली कांग्रेसको १३ औँ महाधिवेशनबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएकोमा बधाई छ । महामन्त्रीको जिम्मेवारी पाउँदा कस्तो लागिरहेको छ ? जिम्मेवारी बढेको छ । थुप्रै चुनौतीहरू अगाडि छन् । महामन्त्रीको हैसियतले मेरो मुख्य र पहिलो जिम्मेवारी पार्टीप्रति नै छ । झन्डै ३२ सय महाधिवेशन....पुरा पढ्नुहोस
चरम गुटगत राजनीति १३ अौँ महाधिवेशनमा हावि भयो भने कांग्रेस फुट्न सक्छ
संसदको पहिलो दल नेपाली काँग्रेसको १३ औं महाधिवशेनको सरगर्मी बढेको छ । १२ औं महाधिवेशनबाट सभापति चुनिएका बयोवृद्ध नेता सुशील कोइराला एक कार्यकाल पुनः पार्टी प्रमुखमा दोहोरिन चाहन्छन् । वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पनि सभापतिको दौडमा छन् । काँग्रेसलाई स्थापनाकालको आदर्श....पुरा पढ्नुहोस
संस्थापनमा ठुलो हिस्सा मेरो छ, देउवा पक्षमा पनि सहयोग गर्ने धेरै छन् : पौडेल
मुलुककै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो दल नेपाली कांग्रेस यतिबेला पार्टीको १३औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ। संविधान जारी भएपछि उत्पन्न असहज परिस्थितिका बाबजूद पनि कांग्रेसको महाधिवेशनका कारण अहिले देशका सबै गाउँ, नगर, क्षेत्र र जिल्लामा राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। खासगरी अबको कांग्रेसको नेतृत्व कसले....पुरा पढ्नुहोस